Sunil Khattri, Author at Purakhabar - Page2of 158
मलंगवा : सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकामा वडा नं. ७ का स्थानीयले बाटो बनाउनु पर्ने माग गर्दै आइतबार धर्ना दिएका छन्। मुसैलीका स्थानीयले गाउँको बाटो हिलो भएर हिंडडुल गर्न समस्या भएको भन्दै नगपालिकामा आएर धर्ना दिएका हुन्। बाटो हिलाम्य हुँदा घरबाट निस्कनसमेत कठिनाइ भएको भन्दै बाटो बनाउनु पर्ने माग राख्दै उनीहरु धर्नामा बसेका छन्। बाटो बनाउनका लागि वडाध्यक्षलाई पटक-पटक भन्दा पनि सुनवाइ नगरेपछि नगरपालिकामा आएर धर्ना दिनु परेको मुसैलीबासीले जनाएका छन्। एक सयभन्दा बढी स्थानीय आएर नगरपालिकाको मुल गेटमा धर्ना दिएर बसेका छन्। दलित र विपन्न बस्तीको बाटो बनाउन वडाध्यक्षले अनाकानी गरेको…
बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको एक सेनिटाइजर कम्पनीमा आगलागी हुँदा आठ जना घाइते भएको खुलेको छ। तीन दिनअघि सेनिटाइजर कम्पनीमा मेसिन पड्किँदा घाइते भएका उनीहरूलाई पिपल्स मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि लगिएको थियो। आगलागीबाट शरीरका भाग जलेका घाइतेको उपचारमा कम्पनीले चासो नदेखाएको एक घाइतेका छिमेकीले सेतोपाटीलाई बताए। ‘घाइतेमध्ये तीन जना घर फर्किसकेका छन्,’ उनले भने, ‘पिपल्स मेडिकल कलेजमा अहिले पाँच जना घाइते छन्। तीमध्ये एक जनाको अवस्था नाजुक छ।’ घाइतेमध्ये चार जनाको अवस्था भने सामान्य रहेको अस्पतालले बताएको उनले जानकारी दिए। ‘शरीरको धेरै भाग जलेकालाई डाक्टरहरूले बचाउनुभएको हो। तर अहिले अर्को अस्पतालमा…
काठमाडौं/ भारतीय चलचित्र अभिनेता अभिषेक बच्चनलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।यसअघि शनिबार नै उनका पिता अमिताभ बच्चनलाई पनि संक्रमण पुष्टि भएर अस्पताल भर्ना भएका थिए । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अमिताभ र अभिषेक दुबैमा संक्रमण पुष्टि भए पनि परिवारका अन्य सदस्यमा संक्रमण देखिएको छैन ।अभिनेता अभिषेक बच्चनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू र आफ्ना पिता अमिताभ बच्चनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको उल्लेख गरेका छन् ।खबरहब
पहिरोले गाउँ बगाउन थालेपछि जाजरकोटको बारेकोटमा ५०० भन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । घर नजिकैबाट पहिरो जान थालेपछि बारेकोट–४ जिरीका ३२ घर, गोठगाउँका आठ घर, मैनागाउँका ५० भन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भएको प्रहरीले जनाएको छ । विस्थापित परिवारलाई हिमालय आधारभूत विद्यालय गोठगाउँ र भगवती आधारभूत विद्यालय जिरीमा राखिएको छ । मैनाका सर्वसाधारण गाउँबाट माथि रहेको रतनकोटडाँडामा आएर बसेको स्थानीय पत्रकार तीर्थराज बोहोराले जानकारी दिए । वडा नं १ को धौलाकोटमा ३२ घरधुरी विस्थापित भएका छन् । त्यस्तै वडा नं ५ को पाखा, तोलखाना र कालाखोलीका १५० भन्दा बढी घरधुरी…
काठमाडौं । नेपालमा शनिबारसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १६ हजार सात सय १९ पुगेको छ । जसमध्ये आठ हजार चार सय ४२ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् ।डिस्चार्ज भएका घर फर्केका यी व्यक्तिमध्ये फेरि कोही व्यक्ति संक्रमित भएर उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएका छन् त ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार उपचारपछि डिस्चार्ज भएका कसैलाई पनि पुनः संक्रमण देखिएको छैन । ‘डिस्चार्ज भएर गएका कसैलाई पनि पुनः कोरोना संक्रमण देखिएको छैन ।’ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा.शेरबहादुर पुनको भनाइ पनि यस्तै छ । ‘संक्रमितमध्ये डिस्चार्ज भएका कसैलाई…
बच्चनले आफ्नाे आधिकारिक ट्वीटर र फेसबुक मार्फत आफूलाई काेराेना पाेजिटिभ भएकाे लेखेका छन् । ७७ वर्षका उनी उपचारका लागि मुम्बईकाे नानावती अस्पताल भर्ना भएकाे भारतीय संचारमाध्यमले लेखेका छन् । ‘आज (शनिबार) साँझ मलाई कोरोना पोजिटिभ भएको छ । अस्पताल भर्ना भएको छु । अस्पतालले सम्बन्धित निकायलाई खबर गरिसकेको छ,’ अमिताभले आफ्नो पाेस्टमा लेखेका छन्, ‘मेरो परिवारका सदस्य र स्टाफको पनि परीक्षण गरिएको छ । नतिजा आउन बाँकी छ ।’ उनले पछिल्लो १० दिनमा आफू र आफ्नो परिवारको सम्पर्कमा आएकालाई पनि परीक्षण गराउन आग्रह गरेका छन् । अमिताभ पछिल्लो पटक सुजीत…
२८ असार, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएपछि सार्वजनिक स्थानमा जाँदा पहिलोपटक मास्क लगाएका छन् । शनिवार वाशिङ्गटन बाहिर वाल्टर रीड सैन्य अस्पताल जाँदा ट्रम्पले मास्क लगाएका हुन् । जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन मास्क लगाउन अनिवार्य रहेको बताउँदै आए पनि ट्रम्पले त्यसको पालना गरेका थिएनन् । उनले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी डेमोक्रेटिक नेता जो विडेनले मुखौटो लगाएर हिँडेको भनेर मजाकसमेत उडाएका थिए । तर शनिबार ह्वाइटहाउसबाट बाहिरिने क्रममा उनले मास्क लगाउनु राम्रो कुरा भएको बताए । उनले भने, ‘म कहिले पनि मास्कको विपक्षमा थिइनँ । मलाई…
२८ असार, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएपछि सार्वजनिक स्थानमा जाँदा पहिलो पटक मास्क लगाएका छन् । शनिवार वाशिङ्गटन बाहिर वाल्टर रीड सैन्य अस्पताल जाँदा ट्रम्पले मास्क लगाएका हुन् । जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन मास्क लगाउन अनिवार्य रहेको बताउँदै आए पनि ट्रम्पले त्यसको पालना गरेका थिएनन् । उनले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी डेमोक्रेटिक नेता जो विडेनले मुखौटो लगाएर हिँडेको भनेर मजाकसमेत उडाएका थिए । तर शनिबार ह्वाइटहाउसबाट बाहिरिने क्रममा उनले मास्क लगाउनु राम्रो कुरा भएको बताए । उनले भने, ‘म कहिले पनि मास्कको विपक्षमा थिइनँ ।…